घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू Thorgan जोखिम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो थोरगन हेजार्ड जीवनीले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू चित्रण गर्दछ।
सरल शब्दहरूमा, यो फुटबलरको जीवन यात्राको कहानी हो, उसको बाल्यकालदेखि, जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - थोरगन हेजार्डको बायोको एक सारांश।
थोर्गन हेजार्डको जीवनी- उनको प्रारम्भिक जीवन र महान उदय हेर्नुहोस्।
हो, तपाईं र म उनको कान्छो भाइलाई चिन्छौं अदनको एक चेल्सी किंवदन्ती हो, जो कोही जसलाई लेबल गरिएको छ युरोपेली फुटबलमा काउन्टर-अट्याकिंग मिडफील्डर्स.
यद्यपि, धेरै फुटबल फ्यानहरूले थोर्गन हेजार्डको जीवनी पढ्न मानेका छैनन्, जुन तपाईंलाई उसको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउँदछ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Thorgan जोखिम बचपन कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनका पूरा नामहरू 'थोरगन गानेल फ्रान्सिस ह्याजार्ड' हुन्। बेल्जियम प्रोफेशनल फुटबलर मार्च १ 29 1993 of को २ day दिनमा बेल्जियमको ला लुभियर शहरमा उनकी आमा क्यारिन ह्याजार्ड र बुवा, थेरीरी हेजार्डको जन्म भएको थियो।
Thorgan दोस्रो छोरा र चार छोराहरूको बच्चा हो, आफ्ना आमा बुबा बीचको मिलनबाट जन्मेको। दुबै उसको आमा र बुबा उनीहरूको s०s मा हुन सक्छ।
थोर्गन हेजार्डका अभिभावकलाई भेट्नुहोस् - उनका बुबा, थेरी र आमा, क्यारिन। के उनले वा ईडेनले आफ्नो आमाबाट उनीहरूको समानता लिएका थिए? ध्यान दिएर हेर्नुहोस्।
सानो थोर्गन आफ्ना दाइहरू, इडन (जेठा), Kylian (तत्काल कान्छो) र Ethhan Hazard (कान्छो) संग हुर्केका थिए। सबै केटाहरू फुटबलरहरूको पारिवारिक कोठा स्वाभाविक रूपमा कब्जा गर्न जन्मेका थिए, यस्तो पेशा जुन उनीहरूको आमाबुवासँग शुरू भयो।
थोरगनले आफ्नो बाल्यावस्थाको धेरैजसो वर्ष बित्नुभयो, जसमा प्रायः आफ्ना दुई दाजुभाइहरू- अदन र क्यालिआन थिए। उत्कृष्ट अभिभावकको पालनपोषणका लागि धन्यवाद, घनिष्ट-दाजुभाइ दिदीबहिनीले समान चीजहरूको समानता लिएका थिए।
उस्तै चीजमा आकर्षण पाउने बारेमा, सुपर तिकड़ीको लागि समानता लिए Zinedine Zidane, र तिनीहरूले यो आफ्ना बाबुआमालाई लिजेन्ड्स नम्बर: १० फ्रान्सेली शर्ट खरीद गर्न अनिवार्य गरे, प्रत्येकको लागि एक। चाँडै, तिनीहरू पनि मिडफिल्डहरू - जुन तिनीहरू आजको हो आक्रमण गर्ने बन्न सहमत भए।
सानो Thorgan (बीच) आफ्ना भाइहरू संग चित्रित, ईडन (दायाँ) र Kylian (बायाँ)। प्रारम्भमा, उनीहरूले जीदानको न: १० फ्रान्सेली शर्टको समानता लिए।
Thorgan जोखिम परिवार पृष्ठभूमि:
कुनै समय फुटबलरहरू भएका आफ्ना आमाबाबुले उनीहरूका सपनाहरू निरन्तरता दिन चाहेको देख्नु सामान्य छ। त्यो निर्णय बिना, आज विश्वले हेजार्ड परिवारलाई मनाउने छैन जुन एक समय एक मध्यकालीन मध्यमवर्गीय परिवार थियो।
निस्सन्देह, थोर्गन हेजार्ड आमा बुबा, क्यारिन र थियरीको फुटबलमा एक बाह्य वंश छ। सुरुबाट, तिनीहरूसँग आफ्ना बच्चाहरूको लागि सुपर ठूला योजनाहरू थिए। दुबै आमा र बुबा यस्तो प्रकारका हुन् जसले आफ्ना बच्चाहरूमा उनीहरूको फुटबल क्यारियर जबरजस्ती गर्न विश्वास गर्दैनन्।
लगाउने को समानता Zidane जर्सीहरू, थोर्गन र तिनका भाइहरूले आफ्ना आमाबाबुबाट आफूले चाहेका सबै कुरा प्राप्त गरे, सबै एक्सेलिllingको नाममा। तिनीहरू सबै फुटबलमैत्री वातावरणमा हुर्केका थिए र थिएरी आफ्नी श्रीमतीसँग (क्यारीन) यस्तो प्रकारका थिए जसले आफ्ना केटाहरूलाई सामूहिक रूपमा चाहेको कुरा पाउनको लागि अतिरिक्त माईलमा जान्छन्। पछाडि, साईकलहरूमा सवार हुनु भनेको उनीहरूको प्रारम्भिक रुचि हो - फेरि, उनीहरूले सँगै गरे।
प्रारम्भमा, हेजार्ड ब्रदर्स सबै सँगै गरे। तिनीहरूका अविभावकले बच्चाहरू बाइकको नयाँ संग्रह स afford्कलन गर्न सक्षम थिए।
Thorgan जोखिम परिवार मूल:
हो, हामी सबैलाई अदनको दाइ चेल्सी किंवदन्ती थाहा छ, बेल्जियमको हो। साथै, थोर्गनको पारिवारिक उत्पत्तिमा, अनुसन्धानले हामीलाई यो बुझेको छ कि ऊ बेल्जियमको दक्षिणी भागको हो र उसको परिवार बेल्जियमको श्वेत जातीय समूहको हो।
थोरगन हेजार्डको परिवारको जराको सम्बन्धमा, बेल्जियमका पुर्खाहरू वालोनिया पूर्वजका हुन्। यो बेल्जियमको फ्रान्सेली भाषी अंश हो जसको मुलुकको 55 XNUMX% क्षेत्रको मानिसहरूले ओगटेका छन्।
थोर्गन दक्षिणी बेल्जियमबाट आएका हो, र उसको पारिवारिक जरा र पुर्खा छ, जर्मनी भन्दा फ्रान्ससँग बढी जोडिएको छ।
Thorgan जोखिम बढ्दो बर्ष:
जब फुटबलरले बाल्यकालको सबैभन्दा मनमोहक सम्झनाहरूलाई फर्केर हेर्छ, ऊ सबैभन्दा सुन्दर अंश सम्झन्छ। थोरगनको बाल्यावस्थाको सबैभन्दा ठूलो स्मृति उहाँ आफ्नो परिवारको बगैंचामा फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो जब उहाँ आफ्नो जेठो दाइ (इडन) साथ साथै उनका चचेरे भाईहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। थोर्गनको शब्दहरूमा;
जब हामी थोरै थियौं, म लक्ष्यमा पुगेँ र एडेन र मेरा सचेरे भाईहरूले मारेजस्तै मलाई गोली हान्न थाले।
के तपाईंलाई थाहा छ?… सानो छँदा, थोर्गानले एक पटक गोलकीपर बन्ने प्रयास गरे। उसले पछि बुझे कि गोलपोस्टमा उभिनु बोरिंग थियो। अझ, तथ्य यो छ कि उहाँ पर्याप्त लामो हुनुहुन्न थियो। धन्यबाद, ईडन ह्याजार्डसँगको सकरात्मक सम्बन्धले सहयोग पुर्‍यायो।
प्रत्येक पहिलो छोरा र बच्चाबाट आशा गरे अनुसार, इडन ह्याजार्डले एक ठूलो भाईको रूपमा भूमिका खेले जुन उदाहरणको नेतृत्वमा थियो। उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो जसले थोरगनका लागि धेरै चीजहरू गर्नुपर्‍यो। सुरुबाट, दुबै केटाहरूले आफ्ना बाबुआमालाई सँधै अभिमानी बनाउन चाहेका थिए, त्यसैले उनीहरूका दुई कान्छो भाइहरू (क्याइलियन र इथान) लाई पछ्याउने मार्ग प्रशस्त पार्नुहोस्।
Thorgan जोखिम जीवनी- शुरुआती क्यारियर बर्ष:
ठूला भाईको रूपमा, एदेन ह्याजार्ड आफ्ना साना भाइहरूका लागि आदर्श थिए। थोर्गन हेजार्डले त्यो विश्वकप वर्ष १ 1998 XNUMX in मा उनीहरूको गृहनगर क्लब, रोयल स्टडे ब्रेनोइसमा सम्मिलित भएर उहाँको पाइला पछ्याए। त्यहाँ, भविष्यमा आक्रमण गर्ने मिडफिल्डरले आफ्नो क्यारियरको लागि राम्रो जग बसाल्यो।
२०० 2003 मा, थोर्जान ह्याजार्डका आमा बुबाले उनलाई दुबै र ईडेनको लागि क्लब स्विचको लागि जोर दिए। दुबै उसको आमा र बुबाले उनलाई ट्युबिजमा भर्ना गराए, अधिक मान्यता प्राप्त बेल्जियम क्लब ट्यूबिize शहरमा। फ्रान्समा उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ युवाहरुलाई ठूला क्लबमा प्रोजेक्ट गर्नका लागि प्रख्यात एकेडेमी हो।
युवावस्थाको क्यारियरको उन्नत चरणहरूको नजिक पुगेपछि बेल्जियमका बुबा थेरीले सन्‌ २०० in मा फुटबलबाट अवकाश लिने निर्णय गरे। आफ्ना छोराहरू विशेष गरी इडन र थोर्गनको लागि बढी समय दिन उनी रिटायर भए।
रणनीतिकरणको एक तरीकाको रूपमा, थोर्गन हेजार्डका आमा बुबाआमाले निर्णय गरे कि उनीहरूका केटाहरूले आफुसँग प्रतिस्पर्धा नगर्नको लागि छुट्टै क्लबहरूमा जान्छन्। २००den मा ईडेन, फ्रान्स लिल ओएससीमा सामेल हुनको लागि प्रस्थान गरियो। तीन वर्ष पछि, भाग्यशाली थोर्गनले युवा प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि आरसी लेन्सबाट प्रस्ताव प्राप्त गरे।
Thorgan जोखिम जीवनी- फेम कहानी कहानी:
फेरि, युवा बेल्जियमले आफ्नो युवा क्यारियर जारी राख्न विदेश यात्रामा सहमत भई आफ्नो ठूला भाईको पाइला पछ्याए। थोर्गन हेजार्डका आमाबुवाहरूले उनको लागि आरसी लेन्समा प्रस्ताव स्वीकार गरे। किन क्लब? कारण किनभने उनीहरूको प्रशिक्षण सुविधाहरू उनीहरूसँग बेल्जियमको तुलनामा राम्रो थियो।
थोरगन हेजार्डले एकपटक भने, “मेरा आमाबुवाले मलाई तुलना गर्न नहुने इडन जस्तो क्लबमा नपर्न रुचाए।
भविष्य बेल्जियमका फुटबलर आफ्नो नयाँ क्लबको साथ एक छाप बनाउन द्रुत थियो। लेन्समा हुँदा, थोरगन साथी फ्रान्सेली डिफेन्डरसँग खेले Raphael Varane। सँगै, तिनीहरूले आफ्नो टीमलाई २००//२००16 सत्रमा अण्डर १ 2008 च्याम्पियनशिप जित्न मद्दत गरे।
आरसी लेन्समा, जवान राफेल वारानेसँग खेले र उनी उनीहरूका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीहरू मध्ये एक थिए।
थोर्गन हेजार्ड जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
आफ्ना बाबुआमाको खुशीको लागि, जवान, २०१० मा, आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यस उपलब्धीको समयसँग मिल्दोजुल्दो छ जब उनका ठूला भाई इडन, LOSC Lille मा एक सुपरस्टार बनेका थिए। त्यस समयमा, इडेन शीर्ष यूरोपीयन क्लबहरू द्वारा पीछा भइरहेको थियो जसमध्ये चेल्सी एफसी थियो।
जुलाई २०१२ को २th औं दिनमा, थोर्गन हेजार्डका आमाबुबाले निर्णय गरे कि उनले आफ्ना ठूला भाईसँग पुनर्मिलन गर्नु पर्छ जसले लिललाई भर्खरै चेल्सीको लागि छोडे। इडनको लोकप्रियताको कारण चेल्सीले तुरुन्त यसको वेबसाइटमा पुष्टि गर्‍यो कि तिनीहरूले थोर्गनको स्थानान्तरणका लागि लेन्ससँग सर्तमा सहमति गरेका थिए।
दुर्भाग्यवस, चेल्सी फ्यानहरूले थोरगन आफ्नो ठूलो भाई इडेनसँग खेलेको हेर्न पाएनन्।
चेल्सी प्रशंसकहरूले धैर्यताका साथ दुबै भाईहरूको लागि ब्रिजमा टीम गर्नका लागि कुर्दै रहे, तर दुःखको कुरा, त्यो भएन। इडेनले लन्डन क्लबसँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा थोरगन loanणमा पठाइए। उक्त जवान व्यक्तिले आफ्नो ज्याला तिर्ने क्रममा उसले आफ्नै भाइको छायाबाट टाढा जाने योजना बनायो जुन उसले गर्यो !!
उनको सफलता सिर्जना गर्दै:
एक फरक क्यारियर प्रलोभन लिनु सबै भन्दा राम्रो निर्णय थियो किनकि यसले उनलाई एक खेलाडीको रूपमा सुधार गरेको छ। थोर्गन हेजार्डको loanण यात्राले उनलाई पहिलोपटक बेल्जियमको पेशेवर फुटबल क्लब, एसभी जुल्ट वारेगेममा ल्यायो। त्यहाँ छँदा, जवान, कुनै समय मा क्लबको कप्तान (उमेर २०) बन्न सकेन।
यो त्यहाँ समाप्त भएन। थोरगान ह्याजार्डको परिवारको आनन्दलाई पनि कुनै सीमा थिएन जब उनीहरूले आफ्नै बेल्जियमको गोल्डन जुत्ताबाट सम्मानित भएको देखे। यो बेल्जियमको सर्वश्रेष्ठ घर-आधारित फुटबलरहरूलाई प्रदान गरिएको पुरस्कार हो।
बेल्जियम गोल्डन शु र फुटबलर अफ इयर पुरस्कार थोरगनको लागि ठूलो व्यक्तिगत सम्मान थियो।
उसको अदनको छायाँबाट बाहिर निस्किदै:
बेल्जियममा भएको सफलताले थोर्गन हेजार्डलाई इ England्ल्यान्डको फिर्ताको यात्रा र त्यसपछि बुन्डेस्लिगामा तुरुन्त फर्क्यो। उक्त युवा बोरसिया मheचेng्गलाद्बचसँग एक अर्काबाट अर्को शक्तिमा गए जसमा उनले आफ्नो बचपनको मनपर्ने नम्बर १० शर्ट कमाएको देखियो।
क्लबका लागि goals 46 गोल र 44 10 सहायक बनाएपछि, जवानले आफ्नो बाल्यकाल नम्बर १० जर्सी छोड्ने निर्णय गरे मार्कस थुरम। थोरगनले बोरसिया डार्टमन्डमा स्विच गर्नु अघि आफ्ना माता-पितासँग सल्लाह लिए।
थोर्गन हेजार्डको जीवनी लेख्दा, प्रशंसकहरूले बेल्जियमका पेशेवर फुटबलरलाई आफ्नो भाइको छायाबाट बाहिर निस्केको व्यक्तिको रूपमा देख्दछन्। उनी धेरै धमिलो प्रदर्शनको श्रृंखलामा प्रशंसित छन्, जसले धेरै गोल र सहयोग उत्पादन गरेको छ।
थोर्गनले अब ईदेनको छायाबाट बाहिर निस्कीएको छ। उहाँ हाल आफ्नै व्यक्तिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र हामीले तपाईंलाई यी प्रमाणहरू प्रदान गरेका छौं।
कुनै श doubt्का बिना, मनपर्ने को साथ खेल्दै ईरलिंग हालान्ड, Jadon Sancho र मार्को रीस थोर्गनले बनाएको छ, लीगको सबैभन्दा डरलाग्दो आक्रमणकारी मिडफील्डर्स मध्ये एक हो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Thorgan जोखिम पत्नी र बच्चाहरूको बारेमा:
उसको जेठो भाईले जस्तै बेल्जियमका पेशेवर फुटबलर खुशीयाली विवाहित मानिस हुन्। थोरगनको विवाह मैन्डि किन्डरमन्ससँग भएको छ, जोहान किन्डर्मन्सकी छोरी, जो अहिले एन्डरलेक्टसँग युवा प्रशिक्षण निर्देशक छ। दुबै साँचो प्रेमी बन्नु अघि सब भन्दा राम्रो साथीको रूपमा शुरू गरे र त्यसपछि उनीहरु पतिपत्नी बन्ने निर्णय गरे।
थोर्गन हेजार्डको श्रीमती- मेरी किन्डरम्यानसलाई भेट्नुहोस्। दुबै साथीहरू र प्रेमीहरूको रूपमा राम्रो देखिन्छन्।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, थोरगन र तिनकी श्रीमती दुबैको विवाह अघि मेरी छोरीको नाम 'इलेना ह्याजार्ड' थियो। तिनीहरूको विवाह एक निजी समारोह थियो जुन २०१ December को डिसेम्बरमा घटेको थियो, केवल केहि साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू आमन्त्रित अतिथिको रूपमा।
अधिक, विवाहको फोटो थोरगन हेजार्डको पत्नी र उनी आफैंको अनुहार कभर गर्नको लागि बनाईएको थियो, जुन फुटबलरको गोपनीयता निर्देशनहरूको कारण थियो। के तपाईंलाई थाहा छ? ... ह्याजार्ड र तिनकी श्रीमतीले चम्किलो म्यागजिनहरू वेवास्ता गरे। उनीहरू दुवैले एक रेजिस्ट्री अफिसमा गोप्य रूपमा विवाह गरे।
थोर्गन हेजार्ड र तिनकी श्रीमतीको परिवारको सदस्य र साथीलाई आमन्त्रितको साथ एक निजी विवाह समारोह थियो।
यो बायो राख्दा, आक्रमणकारी मिडफिल्डर र तिनकी श्रीमतीले आफ्नो दोस्रो बच्चा- छोरीलाई स्वागत गरे। थोर्गन हेजार्ड प्रायः आफ्नी श्रीमती र छोरीहरूसँग छुट्टि छुट्टीको मजा लिने सुन्दर फोटोहरू साझेदारी गर्दछन्। थोर्गनको परिवार जनावरको भ्रमण, घोडा चढ्ने भन्दा समुद्री किनारमा हेर्ने र अन्य प्रकारका साहसिक कार्यमा बढी उत्सुक छ।
थोर्गनको परिवार आउटिंग आफ्नै तरिकामा हुन्छ। यस्तो देखिन्छ कि उहाँ समुद्री यात्राको प्रशंसक नहुन सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, बेल्जियमका फुटबलरलाई थाहा छ कि कसरी आफ्नो घरमा सकारात्मक बुबा-छोरीको सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न आफैलाई प्रतिबद्ध गर्ने। साथै, तपाईंले यस लेखमा पहिले अवलोकन गर्नुभएकै होला, थोर्गन हेजार्ड बाल्यकाल कहानी फुटबलको बारेमा बढी थियो। अब, के यो बास्केटबल गतिविधि मुल्याging्कन गर्दै फोकस परिवर्तन हुँदैछ?
एक उत्तम बुबा को संकेत। कसलाई थाहा छ? ... हुनसक्छ थोर्गन ह्याजार्ड छोरी परिवारमा पहिलो बास्केटबलर बन्न सक्छ।
Thorgan जोखिम व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु:
बेल्जियमका फुटबलर पिचबाट आफ्नो जीवन कसरी बिताउँदछ भनेर जान्न तपाईंलाई तिनीहरूको व्यक्तित्वको राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सबैभन्दा पहिला, Thorgan कोही हुनुहुन्छ जो आफ्नो काम वातावरण लिन्छ (फुटबल मैदान) आफ्नो महत्वाकांक्षा र रचनात्मकताको लागि उत्तम स्थान हो।
किनकी, बेल्जियमले उसको अफ-पिच गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी निजी राख्छ। उत्तम उदाहरण भनेको उसको विवाहको फोटो हो जुन उनको अनुहार र उनकी श्रीमती मारीको मात्र देखिन्छ।
सत्य यो हो कि थोर्गन हेजार्डका आमाबाबु उसको नम्र स्वभावको लागि जिम्मेवार छन्। हामी शर्त लगाउँछौं, तपाईं फुटबलर नाइटक्लबमा वा बाहिर पिच बाहिर कुनै विवाद भएको फेला पार्न सक्नुहुन्न। कस्तो एक अविश्वसनीय रूपले तल-पृथ्वीमा साथीहरू!
हामी फुटबलरको सादगी र नम्रता उसको आमा बुबालाई श्रेय दिन्छौं, जसले उसलाई राम्रो बनाए।
साथै, थोर्गानको व्यक्तिगत जीवनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदा यो हो कि उनले आफूलाई आफ्‍नो भाई एदेनको प्रतिद्वन्द्वी ठान्छन्। जहाँसम्म, पिच बाहिर, दुबै सुपर चिसो र एक अर्को बच्चाहरूको संगति हुन मन पर्छ।
पिचमा तिनीहरू प्रतिद्वन्द्वी हुन्। पिच बन्द, ईडन र थोरगन केवल एक अर्को भाईको साथी हो जो एक अर्को बच्चाहरूको संग हुन।
थोर्गानले एकपटक यो कुरा प्रकट गरे कि उनका भाई एदेनसँग कहिल्यै ठूलो बहस भएको थिएन। अधिक, यो तिनीहरूको लक्ष्य हो कि उनीहरूको बच्चाहरूको बिच धेरै सामाजिक कुराकानीको लागि अनुमति दिनुहोस्।
सबै चीजहरूमा सामाजिक, बेल्जियमले कहिल्यै आफ्नो भोजनको साथ ठट्टा गर्दैन र आईफोन प्रयोग गर्न रुचाउँदैन। त्यसमा कुनै अचम्म छैन कि उसले डुरासेल बन्नी जस्ता पिचको वरिपरि घुम्छ।
फुटबलर आफ्नो प्री-म्याच डाइटसँग खेल्दैन, र उसलाई आईफोन प्रयोग गर्न मनपर्दछ।
Thorgan जोखिम जीवनशैली- नेट वर्थ र कारहरू:
बेल्जियम, आफ्नो बायो सिर्जना गर्दा, २० करोड युरो को कुल मूल्य अनुमान छ। Thorgan आफ्नो फुटबल व्यवसाय को माध्यम बाट र "Nike" को उत्पाद समर्थन ब्रांड मार्फत पैसा कमाउँछ।
यो पनि ध्यान दिनुहोस्, बेल्जियमसँग मर्सिडीज ए-क्लास र बेंटली जस्ता प्रीमियम लक्जरी कारहरू छन्। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... BVB प्रशंसकहरू एक पटक थोर्गन हेजार्डलाई बन्टलेसँग पहिलो पटक क्लबमा स्वागत गरिरहेको देखेर खुशी भए। सारांशमा, चम्किलो कारप्रतिको उसको प्रेम उसको फ्ल्यास एन्टी-फ्ल्याश मनोवृत्तिको अपवाद हो।
थोर्गन हेजार्डको जीवनशैली- फ्ल्यास कारहरू हुनु भनेको उसको एन्टी फ्ल्याश मनोवृत्तिको अपवाद हो।
Thorgan जोखिम पारिवारिक जीवन:
तिनीहरू पक्कै पनि ती हुन् खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा प्रसिद्ध फुटबल खेल घर। कुनै श doubt्का बिना, वर्तमान र सेवानिवृत्त फुटबलरहरू बाट बनेको परिवार देख्न गाह्रो छ - यसको सबै सदस्यहरू (कुलमा।)। हेजार्ड परिवार कसरी विकसित भएको छ हेर्नको लागि यो सुन्दर छ।
यो फोटोमा प्रत्येक एकल फुटबलर हो भनेर थाहा पाउँदा राम्रो लाग्छ। हामीसँग यहाँ छ, हजार्ड परिवार।
हाम्रो जीवनी लेखनको यस खण्डमा हामी तपाईंलाई थोर्गन ह्याजार्डको परिवारको बारेमा बढी बताउनेछौं जसमा उसको अभिमानी अभिभावक छ।
थोर्गन हेजार्डको बुबाको बारेमा:
ड्याड थिएरी जसरी उनलाई अक्सर बोलाइन्छ, एक निवृत्त पेशेवर फुटबलर र आफ्ना छोराहरूको सल्लाहकार हुन्। घमन्डी बुबा बेल्जियमको अहिले खस्किएको शीर्ष डिभिजन टोली ला लुभियरका लागि मिडफिल्डर र डिफेन्डर हुन्थ्यो। हामीले खेलमा थियरी ह्याजार्डको क्लासिक फोटो फेला पारेका थियौं र अर्को, जुन त्यसले कति परिवर्तन भएको देखाउँछ।
इडन र थोरगनका बुबा थियरी ह्याजार्ड (पूर्व फुटबलर) लाई भेट्नुहोस्। उहाँ चार जना केटाहरूको गर्वका बुबा हुनुहुन्छ जो सबै फुटबलरहरू हुन्।
थोर्गन हेजार्डको आमाको बारेमा:
प्रसिद्ध फुटबलरहरूको आमाहरू देख्न गाह्रो हुन्छ जो एक समय आफै खेलाडी हुन्थे। क्यारीन ह्याजार्ड, थोर्गनकी आमा एक समय फुटबलर थिए (स्ट्राइकर ठीकसँग)।
के तपाईंलाई थाहा छ?… थोरगान ह्याजार्डकी आमा अझै पनि स्ट्राइकर थिइन जब उनी आफ्नो जेठो दाइ, इदेनको लागि गर्भवती भइन्। उनी गर्भवती भएको तीन महिना पछि रिटायर भए। आजको दिन, क्यारिनले सबै फुटबल सल्लाहकार आफ्ना पति (थिएरी) लाई छोडिदिइन् जबकि उनी परिवारको घर र इतिहासलाई सुरक्षित राखिरहेकी छिन्।
हामी यहाँ थोर्गन ह्याजार्डकी आमा, उनको पतिसँगै क्यारीन ह्याजार्ड छ। उनी परिवारमा केवल सेन्टर-फारवर्ड (सेवानिवृत्त) हुन्।
Thorgan जोखिम भाइहरूको बारेमा:
के तपाईंलाई उसको जेठो भाई एदेनको कुनै परिचय हुन आवश्यक छ? हामी त्यस्तो सोच्दैनौं! हामी केवल थोर्गनको दुई कान्छो भाइको बारेमा मात्र बताउँछौं जसले उनीहरूको नाम क्यालिअन र एथान राख्छन्।
Kylian जोखिम को हो?
उहाँ थोरगनको तत्काल कान्छो भाई हुनुहुन्छ। तपाईंलाई थाहा छ?… Kylian Hazard र तिनका सबै तीन जना भाइहरू सबै मिडफिल्डहरू हमला गर्दैछन्। बेल्जियम, अगस्त १51995 of को XNUMXth दिनमा जन्मिएको, आफ्नो देशको पेशेवर लिगमा, सर्कल ब्रुजसँग उनको फुटबल खेल्छ। उसको तत्कालै ठूलो भाई जस्तै, Kylian Hazard उनी loanणमा गए पछि उनी चेल्सीले हस्ताक्षर गरे।
परिवारको तेस्रो छोरा, Kylian Hazard भेट्नुहोस्। ऊ आफ्ना ठूला दाइहरु भन्दा ठूलो देखिन्छ।
“वर्षौंदेखि हामीहरू बीच कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धा भएको थियो। इडेन, क्यालिसियन र म सहमत भए कि जो कोहीले थोरै गोलहरू गरे त्यसले परिवारलाई मौसमको अन्त्यमा बेलुकाको खानामा लैजानुपर्नेछ।
थोर्गन हेजार्डले एक पटक जर्मन खेल वेबसाइट- स्पोर्टबज्जरलाई भने।
को हो ईथान हानर्ड?
परिवारको जेठो अगस्ट9को 2003 दिन मा जन्म भएको थियो। ईथान हानर्ड एक फुटबलर हो जसले आक्रमणकारी मिडफील्डको भूमिका आफ्ना तीन भाइहरू जस्तै खेल्छ। युवाले आफ्नो भाइ थोर्गानमा भर पर्नु भन्दा प्रेरणाको लागि अर्को खोजी गर्नु आवश्यक पर्दैन।
थोर्गन हेजार्डको भाई एथान ह्याजार्डलाई भेट्नुहोस्। तिनीहरू धेरै नजिक देखिन्छन्।
Thorgan जोखिम अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो जीवनी लेखनको अन्तिम चरणमा हामी तपाईंलाई अदनको कान्छो भाइको बारेमा केही सत्य बताउनेछौं।
तथ्य # १: औसत नागरिकसँग सम्बन्धमा तलब बिदाइ:
प्रति वर्ष € 1,800,000 £ 1,614,069 $ 2,00,703
प्रति महिना € 150,000 £ 134,506 $ 167,253
प्रति हप्ता € 34,562 £ 30,992 $ 38,537
प्रति दिन € 4,937 £ 4,427 $ 5,505
प्रति घण्टा € 206 £ 185 $ 229
प्रति मिनेट € 3.4 £3$ 3.8
प्रति सेकेन्ड € 0.06 £ 0.05 $ 0.06
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो Thorgan Hazardबायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत जर्मन नागरिक जसले मासिक औसत 3,770 150,000० यूरो कमाउँछ उसले कम्तिमा years वर्ष र दुई महिना १ XNUMX०,००० युरो कमाउनु पर्ने हुन्छ जुन थोर्गन ह्याजार्डको मासिक तलब हो। जबकि, बेल्जियमको औसत नागरिकले तीन बर्ष र छ महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १: किन उसलाई 'थोरगन' भनेर नाम दिइएको थियो:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, संज्ञा को लागी उहाँको नाम भ्रमित नगर्नुहोस्- 'ट्रोजन हर्स।' थोर्गन हेजार्डका आमाबुवाले उनलाई पहिलो नाम "थोरगल एजेरसन" को सम्मानमा दिएका थिए जसले बेल्जियमको साहसी हास्य पुस्तक प्रस्तुत गरेका थिए। यो पुस्तक पहिलो पटक 70० को दशकमा देखा पर्‍यो।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... प्रश्नमा यो चरित्र अर्को ग्रहमा जन्म भएको थियो। पृथ्वीमा उनको स्पेसशिप दुर्घटना भए पछि उनका आमाबुवाले उनलाई वाइकि asको रूपमा हुर्काउन थाले। थोर्गन हेजार्डका बुवा र आमा हास्य चरित्रका ठूला प्रशंसकहरू हुन्, किन उनीहरूले दोस्रो छोराको नाम 'थोर्गन' राखेका थिए।
तथ्य # १: ह्याजार्ड ब्रदर्स तुलना - प्रमाणहरू कि थोर्गन ईदेन भन्दा राम्रो छः
तपाइँ र मलाई थाहा छ थोरगनको लागि नाम कमाउन सजिलो छैन खास गरी जब उसको जेठो भाई (इडन) विश्वव्यापी सुपरस्टार हो। यद्यपि त्यहाँ त्यस्तो समय आएको थियो जब उनको प्रदर्शन तथ्या .्कले उनलाई एक पटक उसको भाई एदेनको भन्दा राम्रो बनायो। तल चित्रण, आक्रमणकारी मिडफिल्डर, जस्तै Felipe एन्डरसन, गरीब रेटिंग्स ग्रस्त।
थोर्गन हेजार्ड फिफा तथ्या .्क। ऊ ती मध्ये एक हो जसले पिचमा धेरै राख्छन् तर गरीब रेटिंग्सलाई सर्फर गर्दछ।
तथ्य # १: थोर्गन हेजार्डको धर्म:
हाम्रो अनौठो आक्रमणकारी मिडफिल्डर क्याथोलिक हुन सक्छ, सायद एक गैर-अभ्यास गर्ने। उनको सोशल मिडियामा होशियारी जाँच गरेपछि हामीले महसुस गर्‍यौं कि थोर्गनले धर्मको बारेमा केहि पनि उल्लेख गरेको छैन। हामी वालुनको उनको जातीय सम्पदा प्रयोग गर्छौं, जसमा 70०% क्याथोलिक छ भन्ने निष्कर्षमा ऊ पुग्दछ कि ऊ एक इसाई (एक गैर-अभ्यास गर्ने क्याथोलिक) हुन सक्छ।
त्यसोभए यसले हामीलाई अहिलेको लागि हाम्रो थोरगन हजार्ड बायोग्राफीको अन्त्यमा ल्याउँछ। यो उनका भर्खरका २०२० कारनामाहरू थिए जसले हामीलाई तपाईंलाई यस लेख प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्न बाध्य तुल्यायो। आफ्नो जीवन कहानी लेख्ने समयमा, आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर आफ्नो चरममा पुगेको देखिँदैन।
अधिक, हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं कि तपाईंको खोज अपेक्षाहरू थोरगन हजार्ड परिवार, बाल्यकाल कहानी, अभिभावक, पत्नी, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली आदिमा सोधपुछको रूपमा मिलेको छ।
यदि तपाईं सबैभन्दा ठूलो जोखिम भाइहरूको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो जाँच गर्नुहोस् ईडेन हेजार्ड जीवनी.
तलको तालिकाले तपाइँलाई थोर्गन हेजार्डको बारेमा छिटो र छोटो जानकारी लिन मद्दत गर्दछ।
पुरा नाम: Thorgan Ganael फ्रान्सिस हेजार्ड।
जन्मे: २ March मार्च १ 29 La ला लूविर, बेल्जियममा।
अभिभावक: Carine Hazard (आमा) र Thiery Hazard (पिता)।
Siblings: इडेन ह्याजार्ड (जेठो भाई), क्यालिअन हेजार्ड (कान्छो भाई) र एथान ह्याजार्ड (कान्छो भाई)।
विस्तारित परिवार सदस्यहरू: यानिस ह्याजार्ड (भतिजा), लियो ह्याजार्ड (भतिजा) र Elayna Hazard (भान्जी)।
पारिवारिक मूल: बेल्जियम वालोनिया पूर्वज।
उचाइ: Feet फिट inches इन्च वा १.5 meters मिटर।
नेट मूल्य: २० मिलियन यूरो (२०२० फिगर)।
शिक्षा: रोयल स्टडे ब्रेनोइस, ट्युबिज र आर सी लेन्स।
खेल्ने स्थिति: मिडफिल्डर र विger्गरलाई आक्रमण गर्दै